निर्दयी सरकारको उदण्ड सिपाही ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Hot News/निर्दयी सरकारको उदण्ड सिपाही !
‘नयाँ युगको सुरुवात’, यही आकर्षक नारासहित ०७५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेृतत्वको सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ कार्यक्रमको शुभा रम्भ गर्‍यो । उक्त योजनाको उद्देश्य नै हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणाली थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ`द्दा फोटोसहित आक्रामक रुपमा प्रचार भएको यो सुरक्षा प्रणालीको अझै पूर्ण कार्या`न्वयन हुनु त कहाँ हो त्यही मज`दूरको पक्षमा काम गर्ने भनेर कहिल्यै नथाक्ने सरकारले गरिव तथा मदुरको व्यव`स्थापनमा देखाएको गलत रवै`याले सरकार मजदुरको हकहितमा कति गम्भीर छ भन्ने यक्ष प्र`श्न अगाडि आएको छ । अ`झ चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र सबैको जानकारीमा छँदैछ ।
गरिव, विप`न्न र मजदुरको प`क्षमा भन्दै सरकारले विभि“न्न कार्यक्रम ल्याएको छ तर उनीहरुको जीवनमा त्यसले छुन सकेको छैन । दिनभर काम गर्न पाए बेलुका चुल्हो बाल्न सक्ने हैसियतका उनीहरुको दैनिकीमा लकडाउनले पारेको असरबारे थाहा पाएर पनि सरकार बेखबर जस्तो देखिन्छ । बरु रोगको भन्दा पनि भोकको चिन्ताले गाउँ फर्किएकाहरुलाई सरकार र उसका सुरक्षा अंगले देखाएको रवैया निर्दयी र उदेकलाग्दो छ ।
समय छदा कुनै पहल र चासो नदेखाएको सरकारले चैत ११ गतेदेखि कोरोनाभाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै लकडाउनको घोषणा गरेपछि ज्याला मजुदरी गर्ने श्रमिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । केहीदिन जेनतेन गुजारा गरेका उनीहरुको जब भएका खानेकुरा र खर्च सकिए, अनि सुरु भयो भोगको रोग । सुरुका दिनमा त गरिव, असहाय र विपन्न वर्गलाई राहत दिनेबारेमा कुनै कदमसम्म नचालेको सरकार चौतर्फी दवावपछि चैत १६ गते राहत दिने निर्णय गर्न बाध्य त भयो तर दिइएको राहत पर्याप्त रहेन । बरु हुने खानेले यहि मौकामा राहत कूम्ल्याए । काठमाडौं महानगरपालिकाकै हकमा कुरा गर्ने हो भने महानगरपालिकाले राहतका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ ।
माप दण्डअनुसार तीन जनासम्म भएको परिवारले १५ केजी चामल र १.५ केजी दाल पाएका छन् भने तीन जना भन्दा बढी परिवार भएकाले ३० केजी चामल र तीन केजी दाल पाएका छन् । उनीहरुलाई नुन, तेल, चिनी, साबुनलगायत पनि दिइएको छ । बेखर्ची भएका मजदूरका परिवारलाई ३५ दिन लामो लकडाउनमा यतिले कुनैपनि हालतमा पुग्दैन । उसो त मजदुरलाई मुख्य समस्या भएको पनि राजधानीमा नै हो । साथै कतिपयको बासस्थान कार्यस्थल नै रहेकाले थप समस्या रह्यो ।